BURMA: Online News & Analysis: September 2009
Posted by Burma Golf Club at 10:27 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 10:18 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 10:13 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 10:26 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 7:09 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 7:55 AM0comments Links to this post
သူတို့၏ဘ၀ဇတ်သိမ်း -"စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က သေနတ်မှန်ထားသော ကျောင်းသူလေးကို သယ်ယူပြေးလွှားနေသည့် ဒေါက်တာ စောလွင်နှင့် ဒေါက်တာ မင်းသိန်း "
(ခင်ငြိမ်းသစ်သည် မကြာသေးခင်က ထိုင်း -မြန်မာနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တဦးဖြစ်သည်။)
(ဧရာဝတီ အင်တာနက် သတင်းစာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=1827:2009-09-18-08-37-06&catid=2:articles&Itemid=30)
ယခု ဆောင်းပါးအား ဖတ်ရှူကြရသော ပြည်သူများထံမှ မှတ်ချက်များအားလည်း ဖြည့်စွက်ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။
"တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန် သူရဲကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးရတဲ့ အတွက် အရမ်းဝ မ်းနည်းမိပါတယ် ..... ........ "
"ဒေါက်တာမင်းသိမ်းက ABSDF တက်ရင်း (၂၁၀)၊ စောထစခန်းကပါ။ အူးသုထ စခန်းမှာထဲက မုပ်ပလင်ကျေးရွာ ညတိုက်ပွဲမှာ သူကျန်ခဲ့တယ်။ လမ်းဆက်ပျောက်ပြီး ကျန်ခဲ့ပုံရတယ်။ သူက မျက်မှန် အထူကြီးနဲ့။ အဲဒီတိုက်ပွဲက ရန်သူု အတွင်းစည်းထဲမှာ သွားဖြစ်ရတာ။ ပြန်အဆုတ်မှာ စစ်ကြောင်းက ၃ ပုံ ကစဉ့်ကလား ကွဲထွက်လာပြီး စုရပ်မှာပြန်ဆုံတယ်။ ဒေါက်တာ မင်းသိမ်းဟာ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ သူ့အသုဘကို ABSDF က ရဲဘော်တဦးက လှို့ဝှက် ရောက်ရှိ အလေးပြုနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။"
"အင်မတန်ကို နာကြည်းခံပြင်း ဒေါသထွက်မိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ လူငယ် သုံးယောက်လုံး လူ့လောက မှာ မရှိတော့ပေမယ့် စစ်ရာဇဝတ်ကောင် တွေက တော့ အရှက်မရှိ မင်းမူတုန်းပဲ။"
"ဒီဓါတ်ပုံကို မြင်တိုင်း အဲဒီ အထဲက ဆရာဝန် ၂ ယောက် ဘယ်မှာ များ ရောက်နေကြသလဲ လို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျောင်းသူလေး ရဲ့ မိဘတွေ အတွက် အမြဲ ပဲ စိတ်မကောင်းဘူး။ ခု မှ အဖြစ်မှန်ကို သိရလို့ ရေးသား ဖေါ်ပြပေးသူ ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဦးစီးတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ဘယ်လောက် ရက်စက် ယုတ်မာ သလဲ ဆိုတာ သက်သေပါ။ ဒါ သမိုင်းပါ။ မပျောက်ပျက်အောင် မှတ်တမ်း ထားသင့်ပါတယ် ။"
"ဗိုလ်ခင်ညွန့် အခု ၀တ်လည်နေပြီလေ ......သူ့ ခေတ်တုံးက ဆေးတွေ သုံးတာ ဆေးထိုး ညှင်း သတ်ဖြတ်တာ တွေကို ကျမတို့ ကြားဘူးပါတယ် အခုလို တိတိ ကျကျ သတင်းတွေလည်း မသိခဲ့ရပါဘူး ....ကျမ ဒီဓါတ်ပုံကို မြင်တို င်းဘေးက ဒေါက်တာနှစ်ယောက် ဘယ်ရောက် နေပါလိမ့် လို့ တွေးမိပါတယ် ...အခုတော့ ရှင်းသွားပါဘူး အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို လူမသိ သူမသိ ...ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်ခံရတာတွေ စိတ်ဓါတ်ကို ဖျက်ဆီး ခံရတာတွေ.... တိုင်းပြည် အကျိုးပြု သားကောင်းတွေကို သတ်တဲ့ ဒီ အာဏာရှင်ကို ခေတ် အဆက်ဆက် မျိုးဆက် အဆက်ဆက် မုန်းတီးမိပါတယ်. ..... ဘယ်တော့ မကြေဘူး..... ဗိုလ်သန်းရွှေ အလှည့် လာအုံးမှာပါ. ..."
"မြင်ဖူးနေတာ ကြာပြီ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာ မသိဘူး အခုလို သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ရင်ထဲမှာလည်း တကယ်ဘဲ့ ခံစားရတယ် သူတို့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ဂုဏ်ပြုပါတယ်"
"ကျောင်းသူလေးမှာ (မ၀င်းမော်ဦး - သေဆုံးချိန်မှာ ၁၆နှစ်၊ ဒဂုံ အ.ထ.က (၁) ကျောင်းသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ဒီဓာတ်ပုံလေးကို မြင်ရတိုင်း ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်တဲ့ ဝေဒနာ တရပ်ကို ခံစားရပါတယ်။ ဒီဆရာဝန် နှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည် ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ထပ်တူ ခံစားလို့ရတယ်။ ဆရာဝန် ဆိုတာ လူ့အသက် တချောင်းကို ကယ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားမှာပေါ့။ သူတို့မှာ အရောင် မရှိဘူး။ အဆင်းမရှိဘူးဗျာ။ ဆရာဝန် တယောက်ဟာ ဆရာဝန် တယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကူညီခဲ့တာ သူတို့မှားလားဗျာ။ သူတို့ အသက်တွေ ဆုံးပါးရသည် အထိ လုပ်တာတော့ တရား လွန်လွန်းတယ် ထင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် အတွက်၊ ဒီ့ထက် ပို၍ ပြောရရင် လူမသိ၊ သူမသိ ကွယ်ပျောက် သွားသူတွေ အားလုံးကို ကျနော် ဒီနေရာက ဦးညွှတ် လိုက်ပါတယ် . . .။ သမိုင်း အထောက်အထား ဒီဓာတ်ပုံလေး ကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ စောင့်ရှောက် ပေးကြပါလို့ ဒီနေရာကမေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါတယ် ခင်ဗျား . . . "
"နအဖများ သိစေရန် - မင်းတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ. ပညာတတ်တွေ ဆုံးရှုံးပြီး အနာဂတ်ရဲ. ခေါင်းဆောင်ကောင်း လေးတွေလည်း ကြွေလွှင့် ခဲ့ရတယ်"
"ဆရာဝန် နှစ်ဦးစလုံးကို ရိုသေစွာ အလေး ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံကို တွေ့ဖူးတာ ကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ခုမှ သိရတာပါ။ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ် မကောင်းဘူးဗျာ။ တကယ့် လူထု ဆရာဝန်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲ"
"ရင်ထဲမှာ ဆို့သွားပါတယ်.... တကယ့်ကို သမိုင်းရဲ့ သားကောင်းတွေ သားကောင် ဖြစ်သွားရခြင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ရ ကိုယ်ယူချင်တဲ့ စိတ် ရှိသူတွေ များနေသမျှ အဲလို ရင်နင့်စရာ အဖြစ်တွေ ဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းရဲ့ ဓါးစားခံတွေ ကိုစတေးနေတဲ့ သမိုင်းရဲ့ တရားခံများ ၊ ဆက်နွယ်သူများ အဲလို ဆောင်းပါးလေးတွေ မြင်နိုင် ဖတ်နိုင်ကြပါစေ။"
(နစ်နေမန်းဘလောက်) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Burma Golf Club at 7:50 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 3:51 AM0comments Links to this post
အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 15 ရက် 2009 ခုနှစ် 14 နာရီ 57 မိနစ်
ကျနော်တို့ We Fight We Win ရဲ့ "Campaign For Burma Solidarity" ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ရွေှ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေ စာသင်ကြားနေကြတဲ့ စာသင်ကျောင်းတခုကို သွားရောက်လေ့လာ၊ အားပေးခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းနာမည်လေးက SAW ကျောင်းလို့ ခေါ်တယ်။ SAW (Social Action For Women) အဖွဲ့က ဦးစီးပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ပညာရေးအဆင့်အားဖြင့် မူလတန်းကနေ အထက်တန်းကျောင်းအထိ ပညာသင်ပေးနေပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျောင်း ၃ ကျောင်းကို မဲဆောက်မှာ ဖွင့်ထားပါတယ်။ SAW က ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နေရာ ၃ နေရာမှာရှိတဲ့ အဲဒီ ကျောင်း ၃ ကျောင်းမှာ ကျောင်းသား ၃၅၂ ယောက်ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈ ယောက်က သင်ပေးနေတာပါ။
SAW အဖွဲ့ကနေ ရွေှ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကျောင်းပညာရေးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အပြင်၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ စောင့်ရှောက်မှု၊ အခမဲ့ ကျန်မာရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု၊ အမျိုးသမီးတွေ အကြမ်းဖက်ခံရမှုကနေ အာကာအကွယ်ပေးမှု၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို အကူအညီပေးမှုတွေ အပါအဝင် တခြား လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ကူညီဆောင်ရွက်နေတာကို အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
SAW မှာ အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ မိဘမဲ့ကလေး ၈ဝဝ ကျော်လောက်ကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်း ကလေးစစ်သားအဖြစ် အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့၊ မတော်တရား အကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအောက်မှာ ရုန်းကန်နေကြတဲ့ ရွေှ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကလေးတွေ အရွယ်မျိုးစုံကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။
Saw ကျောင်းပညာရေးတာဝန်ခံ ကိုမင်းမင်းက ကျောင်းတွေ ဖွင့်ခဲ့ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက မဲဆောက်မြို့မှာ ကျောင်းပညာ သင်ကြားရမယ့် ကလေးတွေ၊ ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေမှာ ရှိကြရမယ့် ကလေးတွေဟာ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့သလို၊ လမ်းဘေးဈေးဆိုင်နဲ့ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာ အမှိုက်ကောက်နေရတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်။ တချို့ ကလေးတွေဟာ မိဘ ဘယ်သူလဲဆိုတာတောင် မသိရှိကြတော့ဘူး၊ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ခေတ်အောက်မှာ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအောက်မှာ နေနေကြရတဲ့ ဒီကလေးတွေဟာ အကျင့်စာရိတ္တတွေ ပျက်ပြားလာခဲ့ကြတယ်''
''ဒီစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ၊ အကူအညီမဲ့နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ ကျောင်းပညာရေး မတက်နိုင်တဲ့ ဒီကလေးတွေ၊ ကလေးစစ်သားအဖြစ် အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့၊ မတော်တရား ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ လူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့၊ စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ အခြေခံပညာရေးတွေ သင်ကြားတတ်မြောက်လာအောင် အကူအညီပေးဖို့၊ အဆင့်မြင့် ပညာရေးတွေ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေကို ရရှိဖို့ ဒီလိုကျောင်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရတာပါ”
SAW အထက်တန်းတန်းကျောင်းမှာတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသား ကလေးငယ်တွေရဲ့ မျက်လုံးမှာ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အတူ အလင်းရောင်တန်းတွေ တောက်ပလင်းလက်နေတာဟာ အင်မတန်မှ အားရကြည်နူးဖွယ်ရာ ကောင်းခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဖွဲ့စည်းတော့မယ်လို့ လာရောက်ပြောပြနေတဲ့ ကလေးစစ်သားအဖြစ် အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားတဦးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူ အနာဂတ်မှာ ကြယ်ပွင့်တွေလို လင်းလက်တောက်ပဖို့အတွက် အားမာန်အပြည့်ရှိနေကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြူစင်တယ်၊ ရိုးသားတယ်၊ ပွင့်လင်းတယ်၊ အားမာန်သစ် ခွန်အားသစ် အပြည့်အဝ ရှိနေကြတယ်။
အနာဂတ် မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ကျောင်းသား၊ ထိုင်းကျောင်းသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ကျောင်းစာသင်ခန်းပညာမှတဆင့် တခြား စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတတ်ပညာတွေ၊ နည်းပညာတွေ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတွေကို လေ့လာဆည်းပူးကြဖို့ အားပေးစကားတွေ ပြောကြားခဲ့သလို၊ အထက်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို အပြန်အလှန် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုနိုင်ခွင့် ရခဲ့လို့ အရမ်း ဝမ်းသာကြည်နူးခဲ့ရတယ်။
ကိုဇော်ငြိမ်းလတ်၊ ကိုမင်းမင်း အပါအဝင် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာလည်း မိမိတို့ရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေလို စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ စာသင်ပေးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ မိမိတို့ တတ်မြောက်ထားကြတဲ့ ပညာတွေကို ကလေးငယ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ပညာကို သဒ္ဓါကြည်ဖြူစွာ ပေးလှူတဲ့ စေတနာ (သဒ္ဓါဒါန) နဲ့အတူ သင်ကြားပို့ချပေးနေကြတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သမိုင်းမှာ တတ်နိုင်တဲ့ တာဝန်တွေကို ပေးဆပ်ရင်း ထမ်းဆောင်နေကြတာတွေ့ရလို့ အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းလှတယ်။
အမှန်ပါပဲ။ ပညာရေးဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့အလျောက် အဘက်ဘက်ကနေ ယိုင်လဲချို့တဲ့နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘုံးဘုံးကျမသွားအောင် ထိန်းနိုင်ဖို့ နိုင်ငံသားတိုင်း ပညာတတ်ရေး၊ ပညာသင်နိုင်ရေးဟာ နိုင်ငံတခုအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ လိုအပ်ချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြမယ့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တာမို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြပါစို့။
Posted by Burma Golf Club at 5:34 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 7:22 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 7:53 PM0comments Links to this post